IGrisi iyiphupho kubantu abaningi bakithi. Kubonakala kubo izwe elimangalisayo elinamakha amhlophe nolwandle olwandle. Akuyona yini isithombe esihle kakhulu esifanele inkosi enkulu? Kodwa ngaphambi kokuba upake izikhwama zakho futhi uthenge amathikithi, kufanele uxazulule izinkinga ze-visa. Lokhu kungenziwa emadolobheni amaningi aseRussia. Isibonelo, Isikhungo Sokufaka Isicelo seVisa saseGrisi eYekaterinburg sibhekana ngokuphumelelayo nomsebenzi wokuthola imibhalo evela emphakathini. Sizolichaza ngokuningiliziwe namuhla.
I-Greek Visa Service Centre eYekaterinburg: ikheli
Izakhamuzi zaseYekaterinburg eminyakeni embalwa eyedlule zaphoqeleka ukuba zihambe eMoscow ukuxazulula izinkinga ngokukhishwa kwevisa. Kwakubiza kakhulu ngokuhambisana nesikhathi nemali, yingakho isakhamuzi sase-Ekaterinburg singakwazi ukukhokhela uhambo olunjalo.
Njengoba ivulekile, i-Greek Visa Center yaseYekaterinburg yakwazi ukuhlinzeka zonke izakhamuzi ezisebenzise lesi sikhungo ngemibhalo edingekayo. Ngaphezu kwalokho, izakhamuzi zenhloko-dolobha yase-Urals zaphawula ukuqeqeshwa okuphezulu kwabasebenzi beziko kanye nokubuyekezwa okusheshayo kwamadokhumenti. Kuze kube manje, lesi sikhungo sibhekwa njengenye yezinhle kunazo zonke phakathi kwavulekile eRussia.
I-Yekaterinburg, evame ukuya ezweni lakubo iMidlalo yama-Olimpiki, ikwazi kahle ukuthi iVisa Visa Center yaseGrisi eYekaterinburg itholakala kuphi - Kuibysheva, 44. Isikhungo sisekwakha isikhungo esikhulu sokuthenga, lapho kulula khona ukufinyelela noma yiluphi uhlobo lokuthutha umphakathi.
I-visa centre yaseGreece eYekaterinburg ivulekile izinsuku ezinhlanu ngesonto. Amadokhumenti afakwa nsuku zonke kusukela ngo-9 ekuseni kuze kube ntambama ntambama. Ungathola amaphasipoti okwenziwe ngomumo ezinsukwini ezifanayo kusukela ngo-9 ekuseni ekuseni kuze kuhlwe ntambama.
Sicela uqaphele ukuthi yonke inqubo iqhutshwa kuphela ngokulandelana komugqa ophilayo. Ukwamukelwa kwabasebenzi bokutholwa kwesikhungo akuqhutshwa, okuyiqiniso, okuletha ukuphazamiseka. Nakuba kulesi sikhungo ukuthi umkhuba wezingxoxo zokuqala, okhona kuzo zonke izikhungo ezifanayo, ukhanseliwe.
Uma nje udinga iseluleko ku-visa noma ezinye izinkinga, ungahlala ubiza inombolo yocingo ekhonjisiwe kuwebhusayithi esemthethweni. Abasebenzi be-Visa Application Center yaseGreece bazohlinzeka ngemisebenzi yokubonisana futhi baphendule yonke imibuzo ephakama. Ngenxa yongcweti yesikhungo uzothola ngokuningiliziwe ukuthi kukhishwa i-visa eya eGrisi.
Ekaterinburg, isikhungo seVisa: ukubhaliswa kwamadokhumenti
Ukuze sihambe eGrisi, abantu bakithi badinga ukuthola i-visa ye-Schengen. Ngakho-ke, iphakheji lamadokhumenti akunakwenzeka kubonakale engavamile. Izidingo zalo zifana ne-visa ezidingekayo ukungena emazweni amaningi aseYurophu. Udinga ukuhambisa:
Ipasipoti namakhophi azo zonke amashidi ayo;
Isithombe sombala wezinga elijwayelekile lalezi zinhloso;
Amadokhumenti aqinisekisa ukukhokhwa kwehhotela;
Amathikithi e-air (uhambo olujikelezayo);
Isitifiketi esivela ebhange mayelana nesimo samanje se-akhawunti;
Amaphepha asekela (uma ungasebenzi).
Uma uqoqe iphakheji lamadokhumenti ngendlela efanele, ungawayisa kwisikhungo sokufaka isicelo seVisa saseGreece eYekaterinburg bese ulindele impendulo. Ngokujwayelekile inkinga ixazululwa zingakapheli izinsuku ezinhlanu zokusebenza.
Izici zokubhaliswa kwe-visa
Uma uya eGreece okokuqala, khumbula ukuthi kuzodingeka wenze umshuwalense wezokwelapha. Lokhu kusebenza kubavakashi abagibela izwe bebodwa. Ephaketheni lezokuvakasha, umshwalense uvame ukuhlinzekwa futhi kufakwe izindleko eziphelele. Inani lemithetho yomshuwalense Isikhungo se-Visa asilawulwa, ngakho-ke ungakwazi ukukhetha okukhethwa kukho kwesabelomali. Kuzobiza ama-ruble ayizinkulungwane ezimbili kuya kwezintathu.
Ungakhohlwa ukuthi isikhungo seVisa saseGreece eYekaterinburg sithatha izinsizakalo zayo ngenani elithile elizofakwa kwi-consular fee. Ngenxa yalokho, kuzodingeka ukhokhe cishe ama-ruble ayizinkulungwane ezintathu nengxenye yomuntu oyedwa. Le mali ithathwe kumuntu ngamunye ohamba naye (ngaphandle kwabantwana abangaphansi kweminyaka eyisithupha ubudala).
Yiqiniso, ukukhipha i-visa akuyona into elula ukuyenza. Kodwa izinhlangano eziningi ezikhethekile zizosiza kakhulu le nqubo. Ngakho-ke, izakhamuzi zaseYekaterinburg zingakwazi ukuhambisa i-visa eGrisi ngokushesha bese zihamba uhambo olulinde isikhathi eside.
Indawo yokuhlala e-Arcadia. I-Odessa idolobha lapho litholakala khona
"UMbhoshongo WaseBhabhele", uchungechunge ithelevishini: nabalingisi ngesakhiwo